आखिर शाहरुख खान कसरी बने ‘बौवा सिंह’ ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, १० पुस, बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको नयाँ फिल्म ‘जिरो’ भरखरै रिलिज भएको छ । फिल्मको बारेमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु पनि आइरहेका छन् । फिल्मको व्यापारको चर्चा बढी या कम होला तर उनको आकारको चर्चा भने निक्कै भइरहेको छ ।
फिल्म ‘जिरो’ मा शाहरुखले ‘बौवा सिंह’ को भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ‘बौवा सिंह’ अर्थात् ‘बामपुड्के’ । ५३ वर्षको उमेर पुगेका र १ दशमलव ६९ मिटरको उचाई भएका मान्छे आखिर कसरी बने त बामपुड्के ? यो निक्कै चासोको विषय बनेको छ र हो पनि । धेरैलाई उनको फिल्म हेरेपछि यो प्रश्नले अचम्मित पारेको होला ।
हलिउड र बलिउड चलचित्रमा प्रविधिले निक्कै फड्को मारिसकेको छ । एनिमेटेड चलचित्रदेखि विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी मानिसको रुप, रंग, स्वरुप परिवर्तन हुने, ठूलो वा सानो बनाउने सकिने भएको छ । यस्तै प्रविधिको एक रुप हो चलचित्र ‘जिरो’ र शाहरुख खानको ‘बौवा सिंह’ स्वरुप ।
यसरी मान्छेलाई सानो वा ठूलो रुपमा देखाउने प्रविधिलाई ‘फोर्सड पर्सपेक्टिभ’ प्रविधि भनिन्छ । यो प्रविधिबाट अप्टिकल इल्युजन बनाइन्छ जसको मद्दतले मान्छेको वास्तविक आकार भन्दा सानो वा ठूलो बनाउन सकिन्छ ।
यस्तो फिल्म तयार गर्दा एउटै सिनलाई दुईपटक खिचिन्छ । पहिलो पटक जसको आकार सानो वा ठूलो देखाउने उसको एंगलबाट खिचिन्छ भने दोस्रो पटक अन्य मान्छे वा परिवेशको वास्तविक आकार देखाउन त्यही सिन खिचिन्छ ।
यो प्रविधि निक्कै खर्चिलो र झण्झटिलो पनि हुन्छ । शाहरुख खानले पनि यो फिल्म बनाउन निक्कै धेरै पैसा खर्च गर्नु परेको बताएका थिए । यो विश्वकै सबैभन्दा एडभान्स्ड भिजुअल इफेक्टयुक्त फिल्म पनि भएको उनी बताउँछन् । यो फिल्म बनाउन शाहरुख खानको कम्पनी रेड चिल्लीज इन्टरटेनमेन्टले ४५० जना मान्छे प्रयोग गर्नु परेको बताएको छ ।
यो फिल्म सुटिङको क्रममा सीजी ट्रयाकर्सको पनि प्रयोग गरिएको बताइन्छ । यो ट्रयाकर्सलाई शरीरमा लगाएपछि जुन सिन सुट हुन्छ त्यसको थ्रीडी तस्वीर बनाउन सकिन्छ । त्यसको मद्दतले सम्पादनमा पनि आकारमा केही फेरबदल गर्न सकिन्छ ।
शाहरुखको फिल्म जिरो पहिलो एडभान्स्ड इफेक्टयुक्त फिल्म भने होइन । यसअघि पनि हलिउडमा यस्तो प्रविधिको प्रसस्तै प्रयोग भएको पाइन्छ । तर बलिउडका लागि भने पहिलो र नयाँ प्रविधि नै हो ।
प्रकाशित मिति: 2018-12-25 2018-12-25 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged फिल्म जिरो बलिउड बौवा सिंह शाहरुख खान
गोरखामा चितुवा आतङ्क
Tags: फिल्म जिरो, बलिउड, बौवा सिंह, शाहरुख खान